यस्तो अवस्थामा पुगी सकेछन् धुर्मुस, प्रेम बानिँयाले गरे गम्भिर खुलासा ! – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २२, २०७८ समय: १४:०६:१०
क्रिकेट रंग शाला बनाउँन नसकेर बसेका धुर्मस निकै वि’क्षिप्त भएको बानिँयाले भनेका छन् । धुर्मुस फ्र’स्टेसनमा गइ सकेको खुलासका बानियाले गरेका छन् ।
पारिवारिक रुपमा पनि निकै तना’वपुर्ण अवस्थामा उनि पुगेका भन्दै बाँनियाले धुर्मुले आ’त्म हत् या नै गर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । धुर्मुस यो अवस्थामा पुग्नु पर्ने उसको के अप’राध हो ? भनेर बाँनियाले प्रश्न सोधेका छन् ।
धुर्मुसलाई भेटेको तस्बिर आफ्नो सामाजिक संजालमा सेयर गर्दै प्रेम बाँनियाले यस्तो लेखेका छन् धुर्मुसले आत्मह,त्या गर्यो भने के हुन्छ ? दुरू’त्साहनको मु’द्दा कसलाई लाग्छ ? देस निमित्त केही गर्छु भन्यो, भूईंचालोले तह’सनहस पारेका केही वस्ती बनायो अनि देसलाई क्रिकेट रंगसाला दिन्छु भनेर त्यो अभियान थाल्यो ।
१७ करोड ऋन छ अहिले १ फाउण्डेशन ऋन तिर्न नसकेर ‘ब्ल्याकलिस्ट’ पर्दैछ ! धुर्मुस आफै बिच’लित देखें! परिवारमा उस्तै तनाब ! छँदा खाँदाको कलाकारिता उसै अलपत्र पर्यो !
हिजोको लोकप्रियता कता गयो ? आज मान्छेहरू कोही माओवादी भन्छन् उस्लाई, कोही के बादी, कोही के रु ‘फ्रस्ट्रेसन’को शि’कार भएको पाएँ!
लामो कुराकानी पछि यो लेख्दैछुस् धुर्मुसले के अप’राध गर्यो यो देसमा रुरुरु यही पी’डामा यदि धुर्मुसले आत्म ह,त्या गर्यो भने यसको जिम्मेवार को हुनेछ रु आत्मह,त्या दुरू’त्साहनको मु’द्दा कसलाई लाग्छ रु सरकारले तत्काल उस्लाई ऋनमुक्त गरेर यो रंगसालाको जिम्मेवारी लेओस् !
Last Updated on: December 8th, 2021 at 2:06 pm